Ndị ụgbọ elu Southwest agaghị achụ ndị ọrụ ya na -eche ka ewepụrụ ha ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ụgbọ elu Southwest agaghị achụ ndị ọrụ ya na -eche ka ewepụrụ ha ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ụgbọ elu Southwest agaghị achụ ndị ọrụ ya na -eche ka ewepụrụ ha ọgwụ mgbochi.
Dị ka onye ọrụ gọọmentị etiti, Southwest ụgbọ elu emeburu atụmatụ itinye ndị ọrụ niile agbabeghị ọgwụ mgbochi na -enwetabeghị nnwere onwe ahụike ma ọ bụ nke okpukpe ka ọnwa Disemba 8 gachara akwụghị ụgwọ.
Ihe ncheta a na -emesi ndị ọrụ obi ike na ha nwere ike ịga n'ihu na -arụ ọrụ ma ọ bụrụ na akwadoghị nhapụ ha.
Kama ezumike akwụghị ụgwọ, ndị ọrụ Southwest na -eche ikpe ga -aga n'ihu na -anata ụgwọ ọnwa.
Ọ bụrụ na agọnarị nhapụ ha, ndị ọrụ nwere ike itinye akwụkwọ ọzọ ma ọ bụrụ na ha nwere ozi ọhụrụ ma ọ bụ ọnọdụ.
A naghị amanye ndị ọrụ Southwest ụgbọ elu ka ha gaa ezumike akwụghị ụgwọ mgbe ha na-etinye akwụkwọ maka nnwere onwe na iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19.
Ka emechara ngagharị iwe otu izu, ịgọnarị na ịkagbu ụgbọ elu, ụlọ ọrụ ụgbọ elu atụgharịala ụzọ n'iwu ịgba ọgwụ mgbochi onye ọrụ ya.
Southwest Airlines agaghịzi amanye ndị ọrụ na -eche mkpebi maka ịhapụ ikike okpukperechi ma ọ bụ ahụike n'iwu ịgba ọgwụ mgbochi iwu ka ha gaa ezumike akwụghị ụgwọ ruo mgbe ekpebiri ikpe ha, dị ka ndetu nke ndị ọrụ akụkọ nwetara taa.
Southwest akwadola izi ezi nke ihe edeturu, nke na -enye ndị ọrụ ruo Nọvemba 24 ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma ọ bụ tinye akwụkwọ maka mwepu.
Kama ezumike akwụghị ụgwọ, ndị ọrụ na -eche ikpe maka mwepụ ha ga -aga n'ihu na -anata ụgwọ ọnwa ma nwee ike ịga n'ihu na -arụ ọrụ "dịka [Southwest] na -ahazi ha na imezu ihe achọrọ (ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ebe obibi dị mma)," ndetu ahụ kọwara.
N'ịbụ onye onye osote onye isi oche nke ọrụ na ile ọbịa Steve Goldberg dere na osote onye isi ala na onye isi ndị ọrụ Julie Weber, ọ na-emesi ndị ọrụ obi ike na ha nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na anabataghị ihe mgbochi ha ma ọ bụrụhaala na ha na-agbaso iwu mkpuchi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na na -ekwe nkwa na ndị ọrụ nwere ike itinye akwụkwọ ọzọ ma ọ bụrụ na agọnarị nhapụ ha ma ọ bụrụ na ha nwere "ozi ọhụrụ ma ọ bụ ọnọdụ [ha] ga -achọ ka ụlọ ọrụ ahụ tụlee."
Mwepụta nke ederede a na-abịa mgbe ụbọchị ngagharị iwe na mpụga isi ụlọ ọrụ Dallas na Southwest na asịrị banyere ọrịa n'etiti ndị na-ahụ maka ụgbọ elu na ndị ọrụ ndị ọzọ. A manyere Southwest ịkagbu ọtụtụ puku ụgbọ elu n'izu gara aga - ihe karịrị 1,000 na Sọnde naanị - n'agbanyeghị na ọ jụrụ ịnakwere ihe kpatara kagbuo a, n'ọtụtụ oge na -ata ụta ihu igwe n'agbanyeghị mbara igwe doro anya na anwụ. Ndị njem iwe ji ka ọdụ ụgbọ elu dị ka ndị njem ga-abịa hụ na akagbuola ụgbọ elu ha na nzuzo.
Dị ka onye ọrụ gọọmentị etiti, Southwest Airlines buru ụzọ mee atụmatụ itinye ndị ọrụ niile a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na -enwetabeghị nnwere onwe ọgwụ ma ọ bụ nke okpukpe ka ọnwa Disemba 8 gachara ezumike.
N'adịghị ka ndị na -ebu ụgbọ ala, n'okpuru ikike onye isi ala, enweghị nhọrọ nke ikwe ka ndị ọrụ na -edo onwe ha n'okpuru ule kwa izu. N'ime izu gara aga, ndị ọrụ 56,000 Southwest ka ga -ewere mgbọ ahụ.
Onye asọmpi Southwest United Airlines nabatara ikike ịgba ọgwụ mgbochi nke ya na Ọgọstụ, tupu Biden ekwupụtakwa iwu gọọmentị etiti, ma yiri nke ahụ na -eyi onye na -ekwenyeghị na ezumike akwụghị ụgwọ. Agbanyeghị, onye ọka ikpe gọọmentị etiti na Fort Worth machibidoro ụgbọ elu ahụ ike ịga n'ihu na ntaramahụhụ ahụ. Ihe dị ka pasent 90 nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ a na -agbado ọgwụ mgbochi.
Na mbido ọnwa a, ndị ọrụ ibe US American ụgbọ elu, Alaska Airlines, na JetBlue nabatakwara ikike ịgba ọgwụ mgbochi gọọmentị, ebe ọ bụ na a na -ewere ha dị ka ndị ọrụ gọọmentị etiti ma si na ha erughị eru ịpụ na mgba.